Fitateram-bahoaka any Thailand ~ Journey-Assist -Inona no mitaingina
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Transport. For rent.
Fitateram-bahoaka any Thailand.
Ao Thailandy, tsy mahafinaritra fotsiny tora-pasika и fiantsenana, fa koa rafitra fitateram-bahoaka mandroso. Saika hatraiza hatraiza ianao dia afaka mitsidika nefa tsy mampiasa serivisy taxi na fitateram-pitaterana manokana. Na dia tokony hanome voninahitra ny taxi taxi Thai ianao, satria amin'ny alàlan'ny fomba tsara dia mahasoa tokoa.
Karazana fitateram-bahoaka any Thailand
Taxi, mandondona ary taxi-be renirano
Ny serivisy tsara indrindra amin'ny fikarohana sy ny fividianana tapakila ho an'ny karazana fitaterana any Azia! 12Mandeha any Azia
Sidina an-trano ao Thailand
Manana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena sivy any Thailandy ary eo an-toerana eo ho eo amin'ny 50! (misimisy kokoa momba ny seranam-piaramanidina Thailandy eto) Betsaka ny firenena mety hialona ny seranam-piaramanidina maro be :). Ka raha tsy te handany fotoana mitsangatsangana mankany Thailand ianao, dia afaka manampy anao ireo sidina sidina ireo. Ny tsenan'habakabaka an-trano dia asehon'ny avidiscounter maromaro, ka ny vidin'ny tapakila fiaramanidina amin'ny sidina an-trano dia demokratika tanteraka. Indrindra raha maka tapakila mialoha ianao.
(ny lohahevitry ny fitaterana an-dalamby any Thailand dia voafaritra amin'ny antsipiriany eto)
Ary raha manampy fiara na ferry amin'ny fiaran-dalamby ianao (hiresaka momba azy ireo eto ambany izahay) dia tsy hisy toerana tsy azo idirana ho anao :). Ireo mpizahatany mahaleo tena dia mampiasa fiaran-dalamby any Thailand.
Ny endri-javatra mahaliana iray dia ny amin'ny fiaran-dalamby dia afaka mividy ilay antsoina hoe tapakila mitambatra any amin'ny toerana tsy alehan'ny lamasinina, fa azo alaina amin'ny fiara fitaterana na sambo mihitsy aza. izany hoe Ny tapakila toy izany dia mety ho tafiditra amin'ny fiaran-dalamby, amin'ny fiara fitateram-bahoaka, na amin'ny sambo. Amin'ny alàlan'ny fomba, ny fandaharam-potoana sy ny vidiny dia azo jerena ao amin'ny tranokala ofisialy http://www.railway.co.th. Ary raha mividy tapakila amin'ny alàlan'ny Internet ianao, dia hampiana ny vidin'ny fandoavana an-tserasera. Ny fividianana tapakila mitovy amin'ny Internet dia azo atao amin'ity tranonkala ity https://www.thairailwayticket.com. Fa ho vonona amin'ny zava-misy fa tsy ny karatra banky rehetra no ekena.
Fividianana tapakila ao amin'ny gara fiaran'ny boaty. Azonao atao ny mividy tapakila ao anatin'ny 60 andro. Saingy, ny tapakila ho an'ny kilasy ambany dia tsy azo amidy mialoha - misy foana ny efitrano.
Details amin'ny kilasy
Mizara ao anaty nosy (Seza 2) ary lainga (Natory kilasy faha-2). Sedentary, tsara ho an'ny fiampitana amin'ny andro antoandro. Ireo rivotra an-dakilasy ity dia zakan'ny rivotra. Miverina ny lamosin'ny seza, ary azo atao ny matory, toy ny amin'ny fiaramanidina. Kilasy lainga, mitovy amin'ny seza voatokana any amin'ireo firenena CIS. izany hoe safidy mendrika tokoa raha mila ampy torimaso tsara ianao. Karazan-tsarety roa karazana ity. Miaraka amin'ny efamira tsy misy varavarana, na miaraka amina fandriana eo am-pandehanana. Amin'ireo kojakoja - trano fidiovana miaraka amin'ny fiara, fandroana amin'ny rano mangatsiaka ary efitra lamba manokan-tena amin'ny toerana tsirairay :). Ary koa, ny kilasy faharoa dia zakan'ny rivotra ary tsy anaovana rivotra (ny tsara dia tsara ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny alina).
Bus any Thailand. Sidina sy fizahan-tany.
(misimisy kokoa momba izany eto + mividy tapakila an-tserasera)
Ny fiara fitateram-bahoaka no angamba ny fomba fitateram-bahoaka mora indrindra any Thailand. Mandritra izany fotoana izany, afaka miditra amin'izy ireo ianao na aiza na aiza eto amin'ity firenena ity.
Taxi sy Knock Knock any Thailand
Karazanà taxi amin'ny Thailand:
Antsoina hoe Taxi Meter io anarana io. Azon'izy ireo fantarina amin'ny anarana mampiavaka ilay taxi-be ary indraindray eo ampitan'ny fiara. Ny mampiavaka azy ireo dia ny fisian'ny mpifaninana iray fotsiny. Aza hadino fotsiny fa ny mpamily fiarakaretsaka dia aleony tsy mampiasa an'io metaly io, ka raha te-hisotra ara-drariny ianao, dia tokony hanaiky ny hampiasa ilay metatra mialoha ianao. Na dia amin'ny tranga mampiasa metatra aza, dia miomàna hanao lalana hafa sy haingo kokoa :). Na izany aza, toy ny izao tontolo izao.
3. Tuk-Tuk sy mototaxi
Tuk Tuki any Thailandy
Mazava ho azy fa tsy misy resaka ny fikajiana izany. Azo antoka koa ny fiarovana, na dia tokony hanome voninahitra ny fahaizan'ny vahoaka Thailand aza isika - dia tsy dia fahita firy ny lozam-pifamoivoizana, raha jerena ny salanisan'ny fivezivezena.
Fitaterana rano any Thailand
Indraindray, ny fitaterana rano ihany no lalana tokana mankany amin'ny nosin'i Thailand. Ary tsy olana lehibe eto amin'ity firenena ity izany. Azonao atao ny mampiasa ny serivisy fitaterana rano ao an-tanàna, izay ahafahanao mividy tapakila eny amin'ireo masoivoho fitetezana any an-toerana ary eny amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina Thailandey aza. Ankoatra izany, afaka atambatra ireo tapakila, i.e. dia hampiditra sidina eny amin'ny fiaramanidina izy ireo, famindrana ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny marina, ary ny dia mankany amin'ny nosy maniry paradisa. azo atao koa ny mampiasa ny serivisy fanamboarana rano manokana "eny an-toerana". Ho lafo kokoa izy ireo, nefa matetika kokoa ary mahazo aina kokoa.
Fanofa tany bisikileta Thailand
Fandaharam-potoana sy ny vidin'ny fiaran-dalamby ao Thailand http://www.railway.co.th
Tranonkala ofisialy ho an'ny fivarotana tapakila amin'ny lamasinina - https://www.thairailwayticket.com
Мобильное приложение Grab Taxi ho an'ny iOS и Android.
Klaiklai. Torohevitra finday mankany Thailand. Hanampy anao hahita ny tobin-dàlana akaiky indrindra, biraon'ny paositra, fijanonana fitateram-bahoaka, tsena, hotely, banky sy ny toy izany. Miteny anglisy. iOS и Android
tsara kokoa ny mandeha bisikileta ary mandeha manodidina an'i Thailandy ho anao manokana! Indraindray kokoa ny fahatsapana ary amin'ny fotoana rehetra dia tompon'andraikitra ianao! Ny morontsirakao rehetra, ny sainao rehetra tsy misy bus tôktuk sangteo ary maro hafa.